Imeri ịkpọasị - Afrikhepri Fondation
Mgbe mmekọrịta nke ịhụnanya na-anwụ, nke ahụ, na-agbagha, anyị na-agba ọsọ n'ihe ize ndụ nke ịdaba na njedebe, enwere karịa mmekọrịta nke ịkpọasị ka ijide na nsọtụ nke mmiri ozuzo ahụ. Ịkpọasị bụ ihe kacha mma ị ga-eme maka ịrịa ọrịa nke ịhụnanya.
Ibu ọnụ nke enweghị enyemaka na-ada mbà: "M kpọrọ gị asị ọnwụ n'ihi na ị hụghị m n'anya". N'ihi ya, ịkpọasị bụ njikọ ikpeazụ, nke kachasị mkpa, nke na-ejikọta onye hụrụ ihe na-enweghị mmasị n'anya, ma eleghị anya nke na-adịbeghị. Ọ dị mkpa ka ị "gụọ" ịkpọasị dị ka ihe ọjọọ nke onye ọhụụ nke ịhụnanya ya (ihe kpatara ya ji dịrị ndụ) na-esi n'ike mmụọ ya nile bibie "ọkara" ya.
Ihere na-ebili kama ịda mbà n'obi. Nke a bụ ihe na-eduga na nsonye nke mmekọrịta ịkpọasị na ndekọ ihe atụ nke sadomasochism ebe ọ na-agaghị ekwe omume ịmata onye na-eme ihe na onye na-enweta: ònye na-edu egwuregwu ahụ? N'eziokwu, ọ bụ otu onye ahụ bụ onye na-ewute ma na-echekwa ihe masochistic. N'ihi ya, ọ ga-eme ka mmadụ nwee onwe ya ahụhụ. Nke a banyere ịbụ "nhụjuanya" nke na-abaghị uru site na nhazi ihe atụ maka enweghi onye nlekota nna.
A ga-emesị tụlee ike ịkpọasị nke mwute dị mwute dị ka mmeghachi omume megide ọnọdụ nke melancholy ebe onye ọhụụ na-achọchu ihu hụrụ ọnọdụ nke kwekọrọ n'ihe ahụ, na ọnwụ. N'ezie, onye na-akpọ asị bụ nhụjuanya bụ onye, ​​na-enweghị nne ihe atụ na-eje ozi dị ka ihe nke ịhụnanya oge ochie, jụrụ ịnwụ ma wụpụ mmetụta ọnwụ ya n'ahụ nne dị ike, maka nzube nke iji kpochapu ya ma jiri obi ya chigharia ya na ihe nke ima ndi mmadu.
Ikpanye ịkpọasị na obi amamikpe bụ mmebi obi ọjọọ kachasị njọ, n'ihi na ọ na-egbubi njikọ ikpeazụ nke jikọtara mmadụ na ụwa ma gbanwee n'ime ọnọdụ mgbu.
Nke a nna ụwa na Nigeria sadomasochistic underpinned site asị ịhụ a na-eju afọ azịza ha ina nke ịhụnanya. The ọrịa na ụwa bụ a ịhụnanya ọrịa na okpukpe gbalịrị unsuccessfully ịgwọ, leghara na ịkpọasị bụ a-emetụta akparamàgwà mmadụ n'ahụ ahụmahụ na-egosipụta a sikwara ike njite ọchịchọ ịdị ndụ, site na sub-nketa nke ihe n'anya nke ụwa a
Okpukpe ndị siworo na nke a gbapụ ugbu a ka ọ dị mkpa ịchọ ụzọ ọzọ a ga-esi edozi nsogbu nke ịkpọasị nke bụ ihe dị egwu nke nhụsianya nke ihe ịhụnanya. Ma ọ bụrụ na anyị nwaa ugbu a, ọ bụ psychart-ọgwụ nke mụtara site na psychoanalysis uru bara uru nke sublimation? Onye na - enweghị ike ịgwọ ọrịa na-egbu egbu site na ịjụ ya (ọ ga - emebi ya) kama ọ bụ site n'ịdị na - emetụ mmetụta nke oge ochie nke na - edozi ya ma kpebie ihe ọ kpatara!
Mmasị ọgwụgwọ psychart bụ, site na ịbanye na mpaghara nke ihe atụ, inye ohere iji bie mmekọrịta dị mwute na nne na-ahụ anya nke onye nkwado aka ya bụ ezigbo ihe ngbanwe. Otu nwere ike ebe a ịkụ ala ya, ịwakpo ya, ibuso ya agha, iji mee ka ọ daa ya, iji dọwaa ya, ịsụ ya, na okwu iji mee ka ọ hụ ya na agba niile. Na-enweghị mkpesa, n'ihi ezi ihe kpatara ya!
Ihe atụ a na-emebi emebi nke dabara na nkwado, enweghị njedebe dị mkpa maka njedebe. A na-aga n’ihu ruo mgbe kaadiboodu na-eyiri ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ruo mgbe iwepu ihe ọ bụla n’echiche ya na onye ọrịa ahụ matara na afọ ojuju juputara n’ihe ụtọ sadomasochistic ụtọ. Ọ bụ mgbe ahụ ka ọ banyere na mmụọ nke mmụọ ịnabata nnabata Okwu ahụ.
The metaphorical ebibi ọrụ bi Okwu ndidi culminates na ntoputa nke a dochie scribbles gbasara nne, onye na-ebu nke ihere na ihe bara uru ihe ịrịba ama na-adọta uche nke wuru onye ọrịa aspires ka e-Mer-ọbìa nke magma. Onye na-ebu Verb (ụkpụrụ okike) bụ otu ebe nke ebe na-akpụ ihe. Ọrụ nke onye kere mmadụ bụ iji nwetaghachi ma tinye ya n'ime ụdị ihe eji emepụta (ihe ndị na-emepụta asụsụ) embrayo nke ụdị edemede nke ọ na-emepụta.
Ntinye n'ime Oghere Ihe Atụ nwere mmetụta nke ịmechasị dị ka snow na anyanwụ ahụmahụ ahụ dị iche iche nke ịkpọasị ma na-eme ka ikike ahụ nwee nkwekọrịta n'ime ihe mmekọrịta.
Nhazi usoro ihe omuma bu ihe ngbagha nke neme ihe ngbochi nke "onu" nke iro, "oria ojoo" nke ndi nwoke ndi eji eji ike.
N'ikpeazụ, anyị ga-ekwu na n'ime Society a ka egbochiri ọganihu ya site n'inwe obi ụtọ na "ụtọ" na "uru zuru oke", ịkpọasị bụ "ihe kachasị òkè n'ụwa".
Oku nke Thomas Sankara maka mkpebi onwe ya
N’Ijipt oge ochie, akpọrọ ndị mkpọrọ “skr-cnh” nke pụtara “onye a dọtara n’agha”